lundi, 25 octobre 2021 20:23
Andranobevava : Mpamily taxi avy nanatitra fiara ande hody voahendaka
Efa somary hariva, amonjy fodiana eny Analamahitsy ity mpamily taxi iray, nandeha tongotra fa tsy nahita taxibe.
Tonga teo Andranobevava, mbola nisy polisy niasa, afaka kely ny stationnement mandeha any Sambava, dia nisy telo lahy teo alohany nandeha tongotra niadana, ka nosongonany.
Vao tafahoatra azy telo lahy anefa izy, dia nandeha aingana ireto telo lahy, ka ny iray nibata azy avy ato aoriana, niainga nihantona ny tongony, ny iray nanambana antsibe teo amin'ny tenda, ary ny iray nisava ny paosin'ilay mpamily.
Tsy nahetsika ilay mpamily fa dia niantona tery ambony, ny antsibe eo amin'ny tenda. Ilay nibata kosa miteny mafy an'ilay mpisava paosy, hanao izany aingana fa mavesatra hoy izy ity batainy.
Rehefa vita ny nataondreo dia natsipin'ilay nibata mafy tamin'ny tany izy, ka fanina tsy afaka nanenjika. Ireo polisy ery amin'ny rond point tsy misy mahita na mandre.
Lasa ny finday sy vola 10 000ar, any sisa vola saika entina mody, fa ny versement efa nomena ny tompony niaraka tamin'ny fiara.
Nanohy ny diany nandeha tongotra nody ilay mpamily taxi, no nihonona amin'ny hoe tsy naratra sy tsy very aina, tamin'ity antsibe teo an-tenda.
lundi, 25 octobre 2021 17:52
Antenimierandoholona : Hifidy izay ho Filoha Lefitra misahana ny Faritany Avaratra
Hotanterahina ny talata 26 Oktobra 2021, etsy amin’ny Lapa maitso Anosikely, ny fifidianana izay ho Filoha Lefitry ny Antenimierandoholona misahana ny Faritany Avaratra.
Izay voafidy eo no hisolo toerana an’i IMBIKI Herilaza, izay voatendry ho Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana minisitry ny Fitsarana nanomboka ny 15 aogositra 2021.
Hatao mialoha io fifidianana io ny fametrahana samboady ny Loholon’i Madagasikara vaovao, Erick Lambert Besoa, solontena avy amin’ny filohan’ny Repoblika.
lundi, 25 octobre 2021 07:10
Antanambao Manampontsy : Saro-dalana ka mitoka-monina efa hatramin’ny Repoblika faharoa
Antanambao Manampontsy. Betsaka Malagasy no manadino, eny tsy mahalala ny fisiany akory. Iray amin’ireo Distrika miisa 119 eto Madagasikara ; ao amin’ny Faritanin’i Toamasina, ary iray amin’ireo Distrika mandrafitra ny Faritra Atsinanana i Antanambao Manampontsy.
Distrika manana otrikarena maro, ary malaza amin’ny vokatra kafe sy jirofo i Antanambao Manampontsy, saingy zary mitoka-monina ka mihitsoka ao noho ny haratsin’ny lalana.
Efa hatramin’ny Repoblika faharoa, ary mandraka ankehitriny no saro-dalana mandeha any. Natao fampitahorana fa andefasana ireo mpiasam-panjakana voasazy noho ity distrika ity zary mitoka-monina izay.
Lalam-pirenena RNT20 no mandeha any. 45km avy eo Ilaka Est Vatomandry no vita tara, fa ny 38 Km dia lalan-tany, tena ratsy, atao iray andro sy tapany no anaovana azy. Mitentina 40 000 Ariary ny sarandalana, ary 400 Ariary/kg ny saran'ny entana.
Zara raha mirehitra ny jiro ao an-drenivohitry ny Distrika, ka isany mampanano sarotra ny fandraharahana any an-toerana, manampy trotraka ny haratsin’ny lalana, ka anaovan’ny mponina ao an-toerana antso avo amin’ny fitondram-panjakana isan’ambaratonga hamahana izany, mba tsy ho faralahy amin’ny fampandrosoana ity Distrika ity.